Warshadaha kiimikada - Hengshui Jrain Frp Co., Ltd.
Kiimikooyinka casriga ah ee maanta jira waxay abuurayaan caqabado badan oo culus oo loogu talagalay agabyada dhismaha ee qalabka lagu farsameeyo. Caqabadaha maaddada ee adeegyadan halista ah iyo kuwa khatarta leh waxay si dhakhso leh u jiheeyaan injineerro ka fog agabyada dhaqameed sida alumada ka samaysan birta iyo birta birta ka samaysan. Alloys wuxuu noqon karaa ikhtiyaar, laakiin ikhtiyaar aad u qaali ah.
Marka la barbardhigo agabkan, fiberka dhalada ah ee lagu xoojiyay caaga ah (FRP) waa ikhtiyaar aalad saaxiibtinimo leh oo miisaaniyadeed. Iyada oo la tixgalinayo waxqabadka u adkaysiga burburka ee FRP iyo faa iidada qiimaha badan ee agabyada kale duwan, FRP waa shey aad u soo jiidasho leh oo ka socda dhismaha jawiga dhaqaale ee maanta.
Qalabka Fiberglass waxay xambaaraan culeysyo firfircoon oo firfircoon oo firfircoon ee jawiga kiimikada, derbi aan fiicneyn oo siman oo ka dhigaysa inay ku habboon yihiin wax ka qabashada, kaydinta iyo socodsiinta dareeraha meydhka ah ama dareeraha ka-baxa, dareeraha iyo gaasaska.
Jrain waxay bixisaa xalal kaydinta iyo daaweynta dareeraha kiimikada, sida:
- Aaladda Hawo-wareed, Sulfuric acid; - acids acids - Sodium iyo Calcium Hydroxide - Sodium Chloride, chloride aluminium, Ferric chloride, soodhiyam sulfate
Lakabka 2 ilaa 5 mm qaro weyn ee lakabka xarkaha kiimikada gudaha ah ayaa ka dhigaya taangiyada adkeysiga kiimikada, oo leh gidaar laba jibbaar ah ama aan lahayn.
Intaa waxaa sii dheer, Jrain waxay bixisaa xalal dhammaan noocyada kiimikada qallalan, sida sodium chloride iyo sodium bicarbonate (BICAR), iwm.
Wershadani waxay ku lug leedahay geedi socodyo isku dhafan marka la eego daaweynta dareeraha kiimikada iyo adkaha. Jrain waxay aqoonsan tahay kakanaanta iyo baahida qaaska ah ee suuqan iyo intaa waxaa dheer haamaha keydinta iyo silos sidoo kale waxay siisaa qalabka habsami u socodka, sida kuwa xoqa gaaska.
Qalabka Fiberglass ee Jrain ay u fidin karto warshadaha kiimikada waxaa ka mid ah laakiin aan ku xaddidnayn haamaha keydinta, xoqyeyaasha, tuubooyinka, tuubbooyinka, daboolida, qalabka labalaabyada, kaydiyaasha, kala-baxa, madax-dhaqameedyada, iwm.
Marka laga reebo alaabooyinka muraayadda ka samaysan, Jrain waxay sidoo kale bixisaa adeegyo dayactir sida dib-u-habeyn, dayactir ka-hortag ah, cusboonaysiin xarunta, dayactirno, iwm. Ku soo dhowow nagala soo xiriir xalka kiimikada ee iska caabbinta.
Dhoolatus gacmeed, Caaryada, Fiberlass-ka Farsamaysan, Mashiinka Dabaysha Fiberglass, Mashiinka Dabaysha ee FRP, Mashiinka Dabaysha ee GRP,